Indlela tie umnsalo iribhoni-ngempumelelo futhi emva kwamaminithi ambalwa?
Ngakho, usuthathe isinqumo ukuhlobisa izandla zabo isipho ibhokisi noma hairpin, kodwa nhlobo umqondo uqalephi? Noma omningi walo msebenzi wawenziwa, kodwa namanje kukhona okushodayo? Khona-ke sekuyisikhathi ukwazi ukuthi uzodlala nendlela tie umnsalo ka iribhoni ukuze kube umsebenzi wangempela yobuciko, futhi ulisebenzise ukuhlobisa noma iziphi izinto! Yini okudingeka uyenze futhi ukuqala kuphi? We uzokutshela konke ukuze.
Indlela ukukhetha tape
Ukuze uthole umnsalo enhle stylish, udinga ukuthola band ephelele. satin Perfect noma usilika, kodwa lungasetshenziswa organza iribhoni noma strip ezondile brocade. Kufanele kube ububanzi ofanele kakhulu. Uma uhlela ukwenza umnsalo phezu kwebhokisi isipho usayizi elincane elilingana kahle le band kungaba 2-3 cm. Uma isipho esikhulu, noma nithatha ukuhlobisa uzimele nesibuko esikhwameni noma into ngokwanele ezinkulu, uzodinga ukuhlubula ububanzi okungenani 5 cm . Ngakho, indlela tie umnsalo iribhoni? Zama ukuzijayeza ku kudabuke ezingadingekile, bese ngempela uthole ubuhle ekhexisayo ikhophi zasebukhosini okuzokwenziwa wayenomona ngisho amakhosi elitheni!
Indlela tie Imicibisholo ka kuze kudabuke umhlane, uyazi noma iyiphi intombazane. Isifundo sokuqala kakhulu - ke uyakhothama intandokazi unodoli izinwele. Kodwa ngemva kweminyaka embalwa, futhi kukhona isidingo sokudala umnsalo enhle stylish, Fluffy noma okunzima. Ngakho indlela tie umnsalo ka kudabuke ngendlela ukubamangaza izihlobo nabangane bakho? Cabangela esinye elula, kodwa ngesikhathi esifanayo ongakhetha ezikhexisayo. Bow-ibhola. Ukwakha kudingekile isitokwe iribhoni kabani Ubude izikhathi 10 kunangendlela lemakethe yama umnsalo. Ifomu ezimbalwa (8-10) ngokuphelele flat ubukhulu emasongweni. Kuyinto efiselekayo ukusebenzisa nalutho ekhethekile le njongo. indima yayo ngokuphelele ukudlala esandleni sakho siqu. Khona-ke udinga ukuthola isikhungo kanye cabaza kancane ezinhlangothini iringi. Bamba isikhungo. Manje ukusika kanye imiphetho tape esikhungweni aboncantathu encane, kangangokuthi akabanga khona kuphela ibhuloho phakathi kwazo. Qiniseka ukuthi unamandla ngokwanele. Hudula kunzima iribhoni mncane, kungakuhle kakhulu kuhambisana Bantus main. Futhi ke ukuqala ukudonsa kwenye iluphu of kakhulu phakathi. Kulesi simo, zama ukuvula lomnyango esiphelele-90 degrees. Ngakho uyokwazi ukwakha ibhola elihle kakhulu. Awu bese ulinamathisela umkhiqizo kungaba ngentambo noma tape kabili emaceleni. Lona omunye kakhulu elula, kodwa ngesikhathi esifanayo ngezindlela okumangalisayo indlela tie umnsalo kuze kudabuke umhlane.
Indlela ukuhlobisa iminsalo ngomumo eyenziwe
Kulabo kakade indlela tie umnsalo kuze kudabuke umhlane, kodwa cha fanele bono kanjani ukuhlobisa, sinikeza izixazululo ezimbalwa ezilula futhi original. Omunye wabo uyoba ukusetshenziswa buckles kumabhande nezicathulo. Bow kumele kube efanelekayo ngosayizi. Kubukeka enkulu nge umhlobiso evamile umnsalo zakudala. Uhlelo oluyisisekelo oluthi kakhulu wukuthi tape ukuthi ihlanganisa phakathi umkhiqizo entabeni is badabula bopha. Ngenxa yalokho, sithola umnsalo zikanokusho esiyingqayizivele. Futhi kungenziwa ngokuphumelelayo esetshenziswa izinsalela ubuhlalu, abanye ubuhlalu, rhinestones, sequins kanye nezinye gizmos ngokulinganayo ezihlekisayo kanye ezingadingekile. Manje ungakha imicibisholo yakho siqu okukhethekile satin kuze kudabuke umhlane, okuzokwenza ukuhlobisa izinto eziningi ezindala.
Beautiful isundu of amabhodlela epulasitiki for engadini
Ngenalithi esikoleni: indlela yokwenza unodoli aphume inayiloni amasokisi amade
Felting Wabasaqalayo: incazelo art nge okuyinhloko ekilasini enemininingwane. Felting izandla zabo
Ngenalithi izifundo: ukunitha Slippers (kwachazwa ukuqaliswa zonke imininingwane yomkhiqizo)
Indlela ukunamathisela tile ku tile egumbini lokugezela phansi futhi asodongeni?
Lasekuqaleni ingaphakathi endlini ugodo: ezithakazelisayo imibono, izici kanye nezincomo
Ungadliwa "ngokuba Maggi yesibili": ukusiza ekhaya abapheki
Indlela ukudweba Pancake? Kulula kabi!
Umshini futha for uzotshala emoyeni ngezandla zakhe
Andrew Ropcha: Biography nemisebenzi
Uwoyela isicelo Coconut
Register TC: indlela yokukwenza kalula futhi ngokushesha